भारतमा गाउँपालिका वडाध्यक्षकै चारवटा कोठी 'यौनगृह' ! कहाँ-कहाँ छन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, पुस १० । महिलना बेचविखनको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नुवाकोटस्थित दुप्चेश्वर गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङले भारतका विभिन्न चार स्थानमा कोठी यौनगृह सञ्चालन गरको तथ्य खुलेको छ ।
याे पनि पढ्नुस चितुवाको आक्रमणबाट चार घाइते
प्रहरीले पक्राउ गरेलगत्तै नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउापालिका १ का तीनजना पीडित महिलाले तामाङविरुद्ध सिआईबीमा जाहेरी दिएका छन्,
कहाँ कहाँ छन् ?
प्रहरीका अनुसार तामाङले भारतका नयाँदिल्लस्थित जेवी रोडको
गल्ली नम्बर ६४, पुनास्थित सोना गार्छे, १५
कोलकाता र मुम्बाई गरी चार ठाउँमा कोठी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।